Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Dẻo Ngon Bằng Nồi Cơm Điện | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Cách Nấu Cơm Gạo Lứt Dẻo Ngon Bằng Nồi Cơm Điện | Muasalebang in Muasalebang
1 Izinzuzo zerayisi elinsundu
2 Indlela yokupheka irayisi elinsundu nge-rice cooker
2.2 Indlela yokupheka irayisi elinsundu
3 Isifundo sevidiyo sokupheka irayisi elinsundu elinamathelayo
4 Indlela yokupheka irayisi elinsundu ebhodweni elivamile
5 Indlela yokupheka irayisi elinsundu ngegazi likadrako esitsheni esicindezelayo
6 Indlela yokupheka irayisi elinsundu ngamantongomane
7 Indlela yokupheka irayisi elinsundu elixutshwe nelayisi elimhlophe
8 Yini eyenza irayisi elinsundu libe mnandi?
8.1 Irayisi elinsundu ngosawoti wesesame
8.2 Irayisi elinsundu elinamanzi olwandle lokulahlekelwa isisindo
9 Isaladi elayisi elinsundu
10 Iseluleko sokukhetha umpheki werayisi onsundu
10.1 Umpheki kagesi
10.2 I-pressure cooker
Izinzuzo zerayisi elinsundu
Uma irayisi elinsundu liguqulwa libe irayisi elimhlophe, lizolahlekelwa u-67% wevithamini B3, 80% wevithamini B1, 90% wevithamini B6 namanye amaminerali amaningi. Uma upheka u-150g werayisi elinsundu, irayisi lizoqukatha kufika ku-84mg we-magnesium, kanti irayisi elimhlophe lino-19mg kuphela. Ingasaphathwa ungqimba bran irayisi ensundu namafutha akhethekile futhi ngempumelelo kakhulu ekulawuleni umfutho wegazi, ukunciphisa cholesterol embi, nokusiza ukuvimbela izifo zenhliziyo.
Ilayisi elinsundu elinomsoco ophezulu lithandwa kakhulu ngabesifazane
Indlela yokupheka irayisi elinsundu nge-rice cooker
Isilinganiso: 4 – Uhlobo: Ilayisi – Isizwe: Vietnam
Amagama angukhiye: indlela yokupheka irayisi elinsundu
Amakhalori: 110.9 kcal
Indlela yokupheka irayisi elinsundu
Isinyathelo 1: Geza irayisi
Geza futhi ucwilise irayisi elinsundu emanzini afudumele cishe imizuzu engama-45 ukuze wenze izinhlamvu zelayisi zithambe futhi zithandeke.
Isinyathelo sesi-2: Faka irayisi ku-rice cooker
Faka kokubili irayisi namanzi ocwilisa ku-rice cooker bese uqala ukupheka.
Ngemva kokuba ibhodwe selishintshele kumodi yokufudumala, qhubeka ufukamela irayisi ebhodweni imizuzu engu-10-15 ukuze usize irayisi lithambe futhi likhule ngokulinganayo.
Hlanganisa irayisi bese ulungisa itafula kancane kancane.
Isifundo sevidiyo sokupheka irayisi elinsundu elinamathelayo
Indlela yokupheka irayisi elinsundu ebhodweni elivamile
Ungakwazi ukupheka irayisi elinsundu ngesitofu segesi, isitofu sikagesi noma isitofu sezinkuni.
Isinyathelo 1: Umpheki werayisi onsundu udinga ukulungiswa ngesivalo esibamba kahle. Ngokufanayo nokupheka nge-rice cooker, ubuye ugeze irayisi bese ulicwilisa emanzini afudumele cishe imizuzu engu-45 ukuze wenze izinhlamvu zelayisi zithambe futhi ziguquguquke.
Isinyathelo sesi-2: Faka irayisi namanzi ebhodweni, ukubeke esitofini segesi bese upheka uze ubile, bese ugoqa irayisi ngokulinganayo. Bese uvala isivalo, uvule ukushisa kube phakathi nendawo, upheke kuze kuphele amanzi ebhodweni.
Xem Thêm 5 Cách Làm Bánh Sữa Tươi Chiên Giòn Thơm Béo Ngậy | Muasalebang
Isinyathelo sesi-3: Uma amanzi omile, lungisa ukushisa ukuze ubilise cishe imizuzu engu-3-5, bese uvala ukushisa, ufukamele imizuzu engu-10 ngaphambi kokusebenzisa.
Indlela yokupheka irayisi elinsundu ngegazi likadrako esitsheni esicindezelayo
Isinyathelo 1: Ngemva kokugeza irayisi, qhubeka ucwilisa irayisi elinsundu ngegazi likadrako cishe amahora angu-4 ukuze izinhlamvu zelayisi zithole ipulasitiki nokuthambile okulindelekile.
Isinyathelo sesi-2: Shintsha ilayisi namanzi kumpheki ocindezelayo ngesilinganiso esingu-1:1.5.
Isinyathelo sesi-3: Vala ibhodwe ngokuqinile, setha isikhathi sokupheka imizuzu engama-30. Lapho irayisi seliphekwe, udinga nje ukuligoqa futhi lingasetshenziswa.
Indlela yokupheka irayisi elinsundu ngamantongomane
Irayisi elinsundu: 1 inkomishi
Amantongomane, ubhontshisi: uphizi, ubhontshisi omnyama, ubhontshisi obomvu, ubhontshisi omhlophe
Isinyathelo 1: Cwilisa irayisi elinsundu nobhontshisi
– Irayisi elinsundu liyagezwa kuqala bese licwiliswa imizuzu engama-45.
– Amachwane, ubhontshisi omnyama, ubhontshisi obomvu kucwiliswe amahora angu-8 kuya kwayi-10
Isinyathelo sesi-2: Hlanganisa zonke izithako ezilungiselelwe.
Isinyathelo sesi-3: Faka amafutha amancane ebhodweni ukuthosa u-anyanisi, bese uthela yonke ingxube kabhontshisi nelayisi elinsundu ebhodweni. Faka usawoti omncane ebhodweni.
Isinyathelo sesi-4: Thela amanzi ebhodweni (ungasebenzisa umhluzi wenkukhu) ukupheka. Ngemuva kwemizuzu engu-40-50, irayisi seliphekiwe, ungakwazi ukulivuselela ukuze ube nesitsha selayisi esinomsoco esiselula ukudla.
Indlela yokupheka irayisi elinsundu elixutshwe nelayisi elimhlophe
Ngokuyisisekelo irayisi elinsundu nelayisi elimhlophe kunokunwebeka okuhlukile nokuqhakaza, irayisi elinsundu uma seliphekiwe liyokoma kunelayisi elimhlophe elivamile. Ngakho-ke, ukupheka irayisi elimnandi, udinga ukunaka isilinganiso sezinhlobo ezingu-2 zelayisi kanye nezinga elifanele lamanzi. Izinyathelo zimi kanje:
Irayisi elinsundu 100g
Irayisi elimhlophe 300g
Isinyathelo 1: Ukupheka irayisi elinsundu lithambile, cwilisa irayisi ubusuku obu-1 noma okungenani amahora ama-4 ngaphambi kokupheka. Bese uyigeza ihlanzeke futhi ukhiphe imbewu enezikelemu.
Isinyathelo sesi-2: Geza irayisi elimhlophe, bese ufaka irayisi elinsundu, uhlanganise kahle, bese ulifaka esitokisini selayisi noma esitsheni esivamile. Thela cishe u-500ml – 800ml wamanzi ebhodweni, bese uvala isivalo bese uvula inkinobho ethi “Pheka”.
Isinyathelo sesi-3: Lapho irayisi seliphekiwe futhi ibhodwe lishintshela kumodi ethi “Okufudumalayo”, vula isivalo bese ugovuzisa irayisi ngokulinganayo ukuze ujabulele.
Yini eyenza irayisi elinsundu libe mnandi?
Irayisi elinsundu ngosawoti wesesame
Ilayisi elinsundu elinosawoti wesesame limnandi, linomsoco futhi kulula ukulenza futhi liyisidlo esivame ukuvela kumamenyu okwehlisa isisindo sabesifazane. Indlela yokupheka irayisi elinsundu ngosawoti wesesame:
Irayisi elinsundu 150g
ISesame 150g (ungasebenzisa isesame emnyama noma emhlophe)
Amantongomane – 200 g
Usawoti okusanhlamvu 70g (kuye ngokuthi ukunambitheka)
Indlela yokwenza irayisi elinsundu ngosawoti wesesame:
Isinyathelo 1: Pheka irayisi elinsundu, indlela iyafana nezindlela ezethulwe ngenhla esihlokweni.
Isinyathelo sesi-2: Okokuqala, faka i-pan non-stick esitofu segesi, lapho i-pan ishisa, engeza amantongomane ngosawoti omncane bese uvuselela kahle. Lapho ubhontshisi unephunga elimnandi futhi uphenduka ube nsundu kancane, isikhumba siqhekekile kancane, cisha ukushisa.
Isinyathelo sesi-3: Vumela amantongomane aphole, bese ukhipha bese uwakhama ukuze ususe amagobolondo.
Isinyathelo sesi-4: Uthathe usesame uwugeze, bese uwubeka esitofini uqhubeke uwosa njengamakinati. Gcoba imbewu kasesame esitofini ukuze yome bese wehlisa ukushisa. Cisha isitofu lapho usesame ushintsha umbala futhi unephunga elimnandi.
Isinyathelo sesi-5: Beka usawoti ogqamile esitofini sokuthosa.
Isinyathelo sesi-6: Kufakwe usawoti, amakinati kanye nesesame egazingiwe. Uma irayisi lishisa, fafaza usawoti wesesame kulo futhi ujabulele. Isitsha sinombala okhangayo werayisi elinsundu ngokunamafutha kanye nephunga elimnandi lamakinati kanye nesesame egazingiwe ngaphandle kokucikeka.
Irayisi elinsundu elinamanzi olwandle lokulahlekelwa isisindo
Ukhula lwasolwandle olunamaqabunga olukhethekile ekwenzeni i-kimmbap
300 g irayisi elinsundu
2 amaqanda enkukhu
2 amasoseji asheshayo
Isinyathelo 1: Pheka irayisi elinsundu, irayisi eliphekiwe lithambile futhi lithambile. Ungabheka indlela yokupheka irayisi elinsundu esitokisini selayisi kanye nesitofu sokucindezela ngenhla.
Isinyathelo sesi-2: Lungisa izithako
Izaqathi zihlutshiwe, zigezwe futhi zibiliswe. Sika izaqathi zibe yimichilo emide.
Geza ukhukhamba nemifino. Sika ikhabe kanye nesoseji kube imicu.
Amaqanda ama-2 uwafake endishini, ashaye kahle. Usawoti omncane kanye nesinongo kungengezwa. Bese uthatha i-omelette pan encane futhi uyinqume ibe yimicu emide.
Isinyathelo sesi-3: Irayisi roll
Spread ukhula lwasolwandle endaweni eyisicaba, engeza irayisi bese usakaza ngokulinganayo ngesipuni. Shiya ingxenye emaphethelweni ukuze irayisi lingahlukani lapho liginqika. Engeza izaqathe, amasoseji, imifino, ukhukhamba, amaqanda bese ugoqa uqinise.
Isinyathelo sesi-4: Sika irayisi libe izingcezu, ufafaze isesame egazingiwe futhi ujabulele.
Isaladi elayisi elinsundu
Ngaphandle kwerayisi, ungashintsha ukunambitheka ngesaladi elimnandi lelayisi elinsundu. Ukwenza kanjani lokhu:
2 wezipuni irayisi elinsundu
1 u-anyanisi oqoshiwe
1 i-bell pepper eqoshiwe
2 amaqabunga eklabishi, aqotshiwe
1 isanqante esisikiwe
½ utamatisi puree
2 ama-clove kagalikhi, oqoshiwe
½ i-ginger egayiwe
2 wezipuni sesame noma amafutha omnqumo
Isinyathelo 1: Thela amafutha epanini elingagxili, linda lize lishise, bese ufaka u-anyanisi nesweli ugovuze kuze kube mnyama futhi kunuka kamnandi.
Isinyathelo sesi-2: Lungisa ukushisa phezulu, engeza iklabishi, utamatisi, izaqathe, ugovuze kahle imizuzu engu-2-3.
Isinyathelo sesi-3: Faka usawoti, pepper kanye nejusi kalamula.
Isinyathelo sesi-4: Engeza irayisi bese ugoqa kahle imizuzu engu-3-5.
Isaladi yerayisi ensundu kulula ukuyidla futhi igcwele izakhi ezizoba isidlo esihle sezinsuku ezishisayo zasehlobo!
Uma ufuna isidlo sibe nomsoco, ungakhetha ukusebenzisa amakhowe amaningi, u-anyanisi oluhlaza, ukholifulawa …
Iseluleko sokukhetha umpheki werayisi onsundu
– I-rice cooker ebukhali: enomthamo webhodwe elingu-1.8l, idizayini eqinile njengebhodwe Ibukhali i-1.8 litre KS-COM185EV-SL, Cijela i-1.8 litre KSH-D18V,…
– I-Sunhouse rice cooker: ifakwe ibhodwe eliwugqinsi, elimbozwe ngezinga eliphezulu futhi eliphephile elinganamathiki uma upheka irayisi njengokuthi I-Sunhouse 1.2L SHD8217W
– Philips irayisi cooker: Ifakwe nge-high-class, umklamo wokunethezeka ofanele izikhala zekhishi zanamuhla ezifana namabhodwe namapani I-Philips 0.7 litre HD3060, Philips 2 amalitha HD3132/66
– I-Sunhouse pressure cooker: Umthamo we-5l ulungele imindeni enamalungu ambalwa avelele I-Anode Sunhouse SHA8504
– I-pressure cooker i-Supor: inesikrini esibonisa imininingwane yenqubo yokupheka, isistimu yokulawula ukushisa ehlakaniphile ehlanganiswe kuyo I-Supor 5 Litre CYSB50YC520QVN-100
– I-kangaroo pressure cooker: izindlela zokupheka eziningi, nokwandisa isikhathi sokupheka njenge I-KANGAROO KG-289
Ngaphezu kwalokho, emcimbini we-Black Friday ngoNovemba 26, 2021, u-Nguyen Kim uletha izenyuso ezikhangayo, izivumelwano zesaphulelo “zangempela” ezingenakubalwa amakhasimende akufanele aphuthelwe, okuhlanganisa nemikhiqizo. I-Midea rice cooker 1.8 litre MB-FS5022 izinga.
I-Midea 1.8 litre cooker rice cooker MB-FS5022 inemisebenzi ehlukahlukene yokupheka enamandla angu-760W enomsebenzi we-timer ukusetha isikhathi sokupheka ukuze sikusize uthathe isinyathelo ngesikhathi sokupheka.
Abapheki Belayisi Abancane Abaphezulu abangu-12 Ngaphansi Koku-1L 2021 Kwenhlangano Yabantu Abangashadile
Uma ufuna ukuthola izeluleko ezengeziwe mayelana nabapheki berayisi, abapheki berayisi abavamile abatholakala e-Nguyen Kim, sicela usithinte ngokushesha ngokusebenzisa iziteshi ezilandelayo ukuze uthole ukwesekwa okusheshayo: